Muudama Doktar Abiyyiifi miira warra Aggaaroo
Muudama Doktar Abiyyiifi miira warra Aggaaroo Featured
Dr. Abiyyi Ahmad Obbo Ahmad Alii
Finfinnee: Aanaalee Godina Jimmaa jalatti argaman keessaa tokko kan taateefi utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e buna baay'inaan biyyaaf gumaachaa kan turte Aggaaroon torban kanammoo kennaa adda ta'e tokko Oromoof darbees sabootaafi sablammiilee Itoophiyaa birootiif badhaafteetti
Ministirri muummee haaraa Wiixata darbe sa'atii 3:19 irrattii sagalee guutuu miseensota Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataatiin muudaman, Doktar Abiyyi Ahmad Alii kennaa Aggaaroon ummattoota biyyattiif gumaachiteedha. Muudamni isaanii kun guutuu biyyattiirra darbee akka addunyaatti ajandaa ta'ee kan ture yoo ta'u namoota hedduu keessattis gammachuufi dinqisifannaan uume ammallee hinqabanoofne.
Taateewwan akkanaatti eenyuuyyuu caalaa maatiin, firoonniifi namoonni naannawa dhalootaa nama kanaa gammachuun isaanii dachaadha. Nutis muudamni Doktar Abiyyi kun ummata naannawa dhalootasaaniitti argamanitti miira akkamii uume laata jechuun Ittigaafatamtuu Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Magaalaa Aggaaroo (WDhKMA) Aadde Misraa Tamaam dubbisnee turre.
Akka isaan jedhanitti, hawaasni naannawichaa gammachuu dachaa argate kana miira addaatiin dhandhamaachaa hojii idilee irratti bobba'e osoo addaan hinkutiin bakkuma jirutti ibsachaa jira.
Magaalaan Aggaaroo magaalaa saboonniifi sablammoonni hedduu keessa jiraatan ta'uu eeranii, haasawa Doktar Abiyyiin booda qeerroon Oromoos “kana booda sabootaafi sablammoota ofitti qabuun nurraa eegama” jechuun isaan ofitti qabanii gammachuusaanii ibsachaa jiru jedhu.
Hawaasni naannawichaas haasawa ministira muummichaa booda akka isaan waan hunda hiikuu danda'an akkasumas, gaggeessaa cimaafi waa hunda guuttateedha jechuun fudhachuusaaniifi abdii guddaa akka irraa qaban eeranii, kana booda gaaffii gama kamiinuu ka'uuf hogganaa nama dhaga'uufi deebii hatattamaa kennuu danda'uu ta'uusaaniitiin gaafiin keenya deebii argata amantaa jedhu akka isaan qabanis ni ibsu.
Dr. Abiyyi nama cimaa ta'uusaaniitiin “kana hojjedhu sana hojjedhu” jedhanii himuun ulfaataa ta'uu kan eeran Aadde Misraan hundaafuu rakkoon biyyattii rakkoo walxaxaafi yeroo dheeraa fudhatu ta'uusaatiin, hundumtuu yeroo kenneefii waldhaggeeffachuun eeggachuu akka barbaachisu dhaamu.
Ripportarri WdhKMA, Geetaachoo Boodanaa, bakka dhaloota Doktar Abiyyi deemuun maatiifi hawaasa naannawa dubbisuusaa nutti himee, keessumaa abbaansaanii Obbo Ahmad Alii (maqaan kabajaasaanii Abbaa Fiixaa Abbaa Dhaasaa) filatamuusaaniitti gammaduusaaniifi tokkummaa biyyattiif bu'aa olaanaa akka argamsiisu himuusaanii ibsa.
Akkuma Dr. Abiyyi haasawaasaanii keessattii eeran, haati isaanii waggaa torbaffaa isaaniitti akka isaan bakka kana qaqqaban dubbachuusaaniifi abbaan ammoo “kana rabbiitu beeka malee tilmaamuun hindanda'amu” jechuun salphisanii dabarsuusaanii eera.
Akka waliigalaatti, firoonniifi hiriyoonni isaanii naannawa dhalootaasaa jiranis, bakka kana ga'uu Dr. Abiyyitti daran gammaduusaaniifi hojiisaanii kam keessattuu isaan faana dhaabachuun akka isaan deggaran ibsuusaaniiti kan nutti hime.
Torban kana/This_Week 11799
Torban darbe/This_Month 91636
Guyyaa mara/All_Days 1603594